Ukungakhali kwendweba kumemele umangobe eziko - Bayede News
Badonsa kanzima onondweba njengoba imidlalo yePremier Soccer League (PSL) imisiwe ngenxa yokhuvethe.
Iningi labo okubalwa kubona abasizi nokhomishana bomdlalo bahola ngemidlalo abasebenze kuyona. Kodwa selokhu kumiswe imidlalo ngoNdasa mhla zili-16 ayibonwa nangokhalo imidlalo yeligi, eyeGladAfrica Championship neyeNedbank Cup, okwenza onompempe bancele izithupha emakhaya.
Ngokwemidlalo asuke eqokwe ukuyidlalisa, unondweba uyayithola imali elinganiselwa ezi-R30 000 ngenyanga. Onondweba abakhulume neBAYEDE kodwa bayidonsa ngendlebe ukuthi angadalulwa amagama abo, babike ukuthi bebenethemba lokuthi bazobhekelelwa esikhwameni soMnyango Wezemidlalo kuzwelonke okhiphe isigidi esili-R150.
Lo Mnyango oholwa uMhlonishwa uNathi Mthethwa wamemezela ukuthi uzobhekelela abadlali nabasebenza ngezemidlalo abathembele ekusebenzeni kuqala ngaphambi kokuthola iholo.
Labo nondweba bathi balithinta iHhovisi leSouth African Football Association (Safa) ephethe izindaba zabo. Bathi ayikho impendulo abayitholayo kodwa basola ukuthi lokho kwenziwe ukwesula isigubhukane kukaMnu uGay Mokoena, obeyiSikhulu Esiphezulu kule nhlangano engamele ibhola kuzwelonke.
Omunye wonompempe othintwe elaboHlanga uneke usizi abhekene nalo. “Unompempe odlalisa eyePSL uthola izi-R6 100 ngomdlalo, abasizi bona bathola izi-R4 700 ngamunye bese kuthi ukhomishana womdlalo agoduke nezi-R4 000. Njengoba siduve emakhaya selokhu kwamiswa imidlalo, ikati lilele eziko ikakhulukazi mina njengoba ngingenawo omunye umsebenzi eceleni. Okusiphatha kabi wukuthi asazi noma iSafa ikhona yini into eyenzayo ukusifakela izicelo eMnyangeni Wezemidlalo.”
Omunye uthe: “Cishe abangama-70% bethu abasebenzi kwezinye izindawo bathembele kule mali yezemidlalo. Abanye ozakwethu banenhlanhla ngoba bawothisha abanye basebenza eminyangweni kaHulumeni.”
Abanye abantu abashayeke kakhulu ngokumiswa kwemidlalo ilabo abavamise ukuqokelwa ukusebenza emidlalweni ye- Confederation of African Football (Caf) efana ne-Africa Cup of Nations, eyeChampions League neyeConfederations Cup.
INingizimu Afrika ivamise ukumelwa uVictor Gomes nabasizi oZakhele Siwele, uJohannes Moshidi noThando Ndzandzeka emidlalweni yeCaf.
Umthombo waleli phephandaba uthe: “Cabanga nje bekumele abanye badlalise eyokuhlunga ye-Afcon ngasekupheleni kwenyanga edlule kodwa ngenxa yokumiswa kwemidlalo, sebeshwebile. Ngokudlalisa imidlalo ye-Afcon bakhokhelwa izi-R21 000 ngomdlalo.”
NgokoMnyango kaMthethwa, sebezicubungulile izicelo zabafuna ukubhekelelwa kodwa labo okuzotholakala ukuthi kubafanele ukuthola le mali bazothintwa.
UTebogo Motlanthe, osanda kuqokwa esikhundleni sokuba yiSikhulu Esiphezulu kuSafa engena endaweni kaMokoena, uthe usazoluphenya udaba lokufakwa kwezicelo zemali zonondweba. Uzeseke ngokuthi usanda kuthatha izintambo kulesi sikhundla esishisayo nokuvamise ukuthi kungahlalwa kusona isikhathi eside kwabasuke beqokiwe.
Okhulumela iSafa uDominic Chimhavi, uthe ngokwazi kwakhe ukhona umbiko awubona oveza ukuthi kunezicelo zonondweba ezaqhamuka. Uthe kwavela izinkinga kumafomu angagcwaliswangwa ngendlela edingekayo njengoba incwadi yasebhange nenombolo yentela kwakungekho ezincwadini ezabhalwa onondweba.
UChimhavi uthe ngokwazi kwakhe abantu iSafa eyabafakela izicelo ilabo abasebenza uma iBafana Bafana, iBanyana Banyana, iqembu lika-Under 20 nelika-Under 23 bezoba nemidlalo.
Lesi sikhulu sivale ngokuthi iSafa imatasa izama ukuhlangana nabe-Unemployment Insurance Fund (UIF) ukuzama ukusiza onondweba, abasizi babo nokhomishana bomdlalo.